तपाईं बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? हुनेवाली श्रीमतीको बारेमा यी ५ कुरा ध्यान दिनुहोस् » Khulla Sanchar
तपाईं बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? हुनेवाली श्रीमतीको बारेमा यी ५ कुरा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं : मंसिर महिना नजिकिदै छ । यहि समय धेरै जनाले विवाहको तयारी गरिरहेको हुनुहुन्छ होला । अथावा प्रेममा परेकाहरुले पनि भविश्यमा विवाहको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला । विवाह भएपछि मानिसको नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ भनिन्छ । तर यदि तपाईंले आफ्नो लागि सहि जीवनसाथी रोज्नुभएन भने तपाईंको जीवन नयाँ भएपनि तनावपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले बिवाह गर्नुहअघि तपाईंकी हुनेवाली श्रीमतीको बारेमा यी पाँच कुरामा ध्यान दिनुहोस्ः
यदि तपाईंकी हुनेवाला श्रीमती तपाईंलाई हरेक विषयमा परिवर्तन हुन सुझाउँछिन् भने विवाहपूर्व यस बारेमा पनि तपाईंले एकपटक सोच्नैपर्ने हुन्छ । किनकी के थाहा उनले कुनैदिन तपार्यंलाई यसैको बाहानामा एक्लै पारिदिन पनि सक्छिन् ।